Ndị na-emepụta akwa akwa China Meltblown | Nkà na ụzụ Shouzheng
Igwe eji akpochapu ihe eji agba oso
Igwe eji eme ihe nkedo zuru oke na akpaaka 1 + 1
Igwe eji eme ihe nkedo zuru oke na akpaaka 1 + 2
Ihe Nleta Nke Kn95
Ihe eji emechi ihe nkpuchi
Uru & Omenala
Ngwa nkpuchi 1 + 1 zuru oke
Ihe nkpuchi Kn95
Enwere ike ikwe nkwa ịdị mma ma dị mma mgbe erere ọrịre:
Sistemụ cezọ Ahịa siri ike.
2.Perpes Production Production na Usoro Nnwale Ogo Ahịa.
3.Modern Management Standard Leading Site na Injinia Ndị Ọkachamara.
Ọnụahịa ụlọ ọrụ 4.Competitive na oge nnyefe ngwa ngwa.
Aha ahia Agbala Ọcha Emere Ọcha
Ihe Ejiri akwa a na-eteghị akwa
Ngwakọta viscose + polyester ma ọ bụ ahaziri ahazi
Ternkpụrụ Mkpụrụ, Mesh, Emobossed ma ọ bụ ahaziri ya
Agba ọcha ma obu ahaziri ya
Ibu ibu 20gsm / 25gsm / 30gsm ma ọ bụ ahaziri ya
Ozo 175mm, 260mm ma ọ bụ ahaziri
Ojiji Nkpuchi ihu, akpa, ugbo, akwa ụlọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ, Garment,
Akpụkpọ ụkwụ, akpaaka, upholstery
Ọnụ ego kwa akpa / mpịakọta / igbe Ahaziri ya
Mbukota Ihe nkiri, akpa akpa OPP akpa, igbe mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ahaziri iche
Ọrụ OEM Ee
MOQ 1 Tọn
Nduputa Mmepụta 7-15 ikp
Atụmatụ ịrụ ọrụ nro Nrụ ọrụ: nwere mgbanwe dị mma, nke nwere ike ịchakọta akpụkpọ ahụ ma kpuchie ọnya akpụkpọ.
Ọrụ: micro-layer nke nwere okpukpu abụọ nke nwere ike ịbanye mmiri mmiri ka mma. Ìhè, dị gịrịgịrị, na uzo. A na-emepụta akwa mmiri anaghị efe efe site na ụgbọ mmiri mmiri na-enwe nrụgide dị elu nke na-abanye n'ime weebụ, eriri ndị ahụ na-efegharị ibe ha ka ha wee mee ka eriri akpa ahụ sie ike ma bụrụ nke zuru oke.
1) Ihe ndozi gas: ihe mkpuchi ahụ ike, ihe mkpuchi ụlọ, ihe ndozi ikuku ihe ndozi: ihe nhicha, nhichapu mmiri.
2) Nkpuchi Mpempe Ahụike Ahụike & Ahụike: akwa nke ime na nke dị na mpe mpe akwa, n'etiti etiti na-agbaze akwa.
3) Ihe nchekwa gburugburu ebe obibi (ihe ndị na - ewebata mmanụ) Meltblown nonwovens ji ihe PP. Ọ nwere ike ịmịkọrọ ugboro 17-20 buru ibu karịa mmanụ nke ya, na nchebe gburugburu, ị nwere ike ime ka mmịpụta, nzacha mmanụ, wdg, na-ejikarị ya na mmanụ na-awụfu mmiri, akụrụngwa nke ahịhịa, ọgwụgwọ mmiri na ihe ndị ọzọ.
4) Uwe akwa nke microfiber na-abaghị uru n'ime sọks, ya mere obi ya dị nro. Na akwa obere oghere, oke porosity, yana ezigbo ikuku na-eguzogide na ezigbo ikuku permeability, ibu dị mfe, na-eme ihe kachasị mma maka ihe mkpuchi mkpuchi nke ihe.
Uwe ulo, oru ugbo & ubi, ihe eji akpu eji akwa, ihe ndi ozo, akwa okpokoro, ma obu ndi ozo.
(20-70gsm): mkpuchi nke ugbo, mkpuchi mgbidi, Ahụike na ịdị ọcha: dị ka
nwa diaper, okpu nke ogwugwo, nkpuchi, gown
(70-100gsm): textile ụlọ: akpa ịzụ ahịa, akpa suut, akpa onyinye, sofa
akwa, akwa mmiri, akwa akwa
(100-200gsm): windo kpuru ìsì, mkpuchi ụgbọ ala
Nke gara aga: Kaadị disinfection
Ihe Meltblown ihe
Agbaze agbaze agbaze
Agbazela akpụ akpụ akpụ
Ngwurugwu Na-adịghị Ekwe Anya
Pp gbazee agbaze
Ime ụlọ 2212, Caijin Building, Shijiazhuang, Hebei, China
Kpọọ anyị ugbu a: 0086-18633492813